Ejypta: Fihaonambe ara-pinoana sy ny fifandraisana Arabo-Isiraeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 6:51 GMT
Sambany nipetraka tamin'ny efitrano iray niaraka tamin'ireo mpitondra ara-politika Israeliana ny mpanjaka Saodiana Abdullah, nandritra ny fihaonambe “ara-pinoana” karakarain'ny Firenena Mikambana, natao tao New York, Etazonia.
Manoratra ao amin'ny Arabic Media Shack, manasongadina ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny gazety Ejiptiana vitsivitsy momba ny fiantraikan'ity fivoriana manan-tantara ity eo amin'ny dingana fandriampahalemana Arabo-Israely i Rob.
Ao amin'ny bilaogy i Rob, izay manoritsoritra ny tenany ho toy ny habaka tsy miandany, ary mamakafaka ny olana politika, stratejika ary ny filaminana ao Afovoany Atsinanana, nilaza hoe:
Nanoratra lahatsoratra masiaka tao amin'ny Al-Dostor androany i Fahmy Huwedi sy Tariq Al-Bashri, Ejiptiana mpaneho hevitra malaza, nitsikera ny Mpanjaka noho ny fandavany fa tsy izy no nahatonga ny herisetra tao Gaza raha manome fandresena lehibe ara-tseraseram-bahaoka ho an'i Israely. Lasa lavitra mihitsy i Bashri milaza fa tsy misy dikany loatra ny fipetrahan'ny mpanjaka ao amin'ny efitrano misy an'i Peres, izay tahaka an'i Sadat nitsidika an'i Jerosalema tamin'ny taona 1977. Avy eo anefa dia nosimbainy ny fitokisana ny heviny tamin'ny filazany fa i Etazonia sy i Isiraely no ao ambadiky ny andrana hampisy fifandonana eo amin'ny Sonita-Shiita mba hamoronana fahavalo vaovao na fisarihan-tsaina vaovao ho an'ny Arabo, ka tsy hifantohan'izy ireo intsony amin'i Isiraely. Mampitaha izany amin'ny hoe ahoana no fomba nitarihan'i Etazonia ny fifandonana eo amin'i Lybia sy Ejipta taorian'ny fifanarahana Camp David, ka namorona “fahavalo vaovao” ho an'ny Ejiptiana hafa ankoatra an'i Isiraely. Ahoana no ahafahana manome tsiny an'i Etazonia noho ny fitarihana ady eo amin'ny Sonita-Shiita raha toa ka ireo manam-pahaizana Sonita ambony, toa an'i Yusuf Al-Qaradawi, no tena feo malaza indrindra amin'ny kabary mankahala Shiita.